Akere Muna waxay ka jawaab celineysaa ku dhawaaqida wadahalka qaran - TELES RELAY
ACCUEIL » SIYAASADDA Akere Muna waxay ka jawaab celineysaa ku dhawaaqida Wadahadalka Qaranka
Madaxweynaha Cameroon Paul Biya ku dhawaaqay Talaadada shir weynaha dhamaadka Sebtember "wada hadal qaran". Me Akere Tabeng Muna, Batonnierkii hore iyo saaxiibkii Maurice Kamto, intii lagu gudajiray doorashadii madaxtinimada ee ugu dambeysay ayaa Khamiistii 12 Sebtember 2019 ka shaacisay ku dhawaaqida wada hadalka qaran. Lebledparle.com wuxuu soo bandhigayaa qoraalka dhameystiran ee wiilka Salomon Tandem Muna.
Akere Muna - DR
KU SAABSAN MACLUUMAAD CUSUB
Wadahadalka Grand National
Waxaan si taxadar leh u dhagaystay khudbaddii uu Madaxweynaha Jamhuuriyadda ka jeediyay 10 Sebtember 2019. Waan soo dhaweynayaa shirweynaha waxa lagu tilmaamay "Wadahadal Muhiim ah oo Qaranka". Laga soo bilaabo 2016, inta ugu badan qoraalladayda iyo hadaladayda guud iyo khudbadayda, waxaan had iyo jeer ku adkaystaa inay muhiim noo tahay inaan midba midka kale la hadalno indhahayaga dhexdooda.
Su'aasha ah ogaanshaha, yaad la hadlaysaa? Waxaan marwalba muujiyey in doodaha ka dhex dhaca Golaha Qaranka iyo Guurtida oo leh dhagaysi dadweyne ay noqon karaan bilow wanaagsan. Nasiib darrose doorashadan lama dooran. Taasi waa sababtaas, waxa aan ka haysto hadalka Madaxweynaha Jamhuuriyadda waa xaqiiqada ah in Wadahadal Qaran oo ugu dambeyntii la isugu yimaado dhammaadka bishaan Sebtember.
Marka halkan waxaan joognaa in kabadan seddex sano kadib, iyadoo in kabadan 2 000 ay dhinteen, in kabadan tuulooyinka 200 waa la gubay halka kumanaan kun oo qofna la dhaawacay iyo naafo ah, 650 000 gudaha ku barakacay iyo in kabadan 50 000 qaxooti dariska la ah Nigeria iyo dalalka kale, iyo gaar ahaan ku dhawaad ​​afar sano iyada oo aan dugsi la dhigan boqolaal kun oo caruurteenna yar. Tan waa in lagu daraa kororka aadka u weyn ee kufsiga ee gabdhaha aan qaan gaarin iyo koror aad u weyn oo ku saabsan tirada uurka ee hore ee la diiwaangeliyey. Dhamaan dhibaatooyinkaas foosha xun, waxaa lagu sii daray dhibaatada kumanaan kun oo qof oo lagu xiray magaalooyin badan oo dalkeenna ah.
Xaqiiqdii, guud ahaan ummaddii reer Cameroon oo dhan waa la daadgureeyay. Sidaa darteed waxaan si xoogan ugu celinayaa talo soo jeedinta dhamaan dadka lagu casuumi doono wada hadalka si ay si hufan ugaqeybgalaan maxaa yeelay sheyga kaliya ee ajandaha kulankaan weyn wuxuu noqon doonaa mustaqbalka dalkeena.
Wadahadalkani waa inuu ahaadaa mid loo wada dhan yahay, maadaama ay mas'uul ka noqon doonto dawladda inay hubiso in fadhiyada oo dhan si toos ah loogu baahiyo si loo hubiyo ka qaybgalka dhammaan umadda munaasabadda. Sidaa darteed waxaan ka codsanayaa xubnaha bulshada rayidka, ururada shaqaalaha iyo axsaabta siyaasadeed ee mucaaradka inay kulmaan mustaqbalka dhow si aan u mideyno jagooyinkayaga. Mustaqbalkeenu gacmaheena ayuu kujiraa wadahadalka qarankuna waa waqtiga ugu haboon ee aan kudhaqmi karno.
Akere. T. Muna
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.lebledparle.com/actu/politique/1109259-cameroun-akere-muna-reagit-a-l-annonce-du-grand-dialogue-national